CP + 2020, Chikamu chemuJapan chisarudzo, chinodzimwa nekuda kwekoronavirus - teles relay
CP + 2020, yakanaka yeJapan mufananidzo, yakadzimwa nekuda kwekoronavirus
Mutongi Aaron anogovera pfungwa dzake pamusoro pekukuvara uye iyo ...
Ndozvinonyadzisira - Diário do Poder - xnxx
Banana Chocolate Chip Cake Recipe -…
Nhau dzinoshungurudza dzevadi vemifananidzo. Rimwe zuva mushure mekuziviswa kwekudzima kweSoftware World Congress muBarcelona, Iyo CP + Photo Lounge inotizivisawo kuti iyo 2020 edition yakadzimwa. Aifanira kumira ipapo Yokohama, mumaruwa eTokyo, kubva munaFebruary 27 kusvika munaKurume 1.
Chiziviso chakaitwa husiku, neicho runyerekupe rwakanga ruchiri kushanda mukati nekudzimwa kwechiitiko ichi.. Yakagadziriswa seimwe yezviitiko zvikuru zvevagadziri vemifananidzo, avo vanowanzoenderana kuti vatange zvigadzirwa zvavo zvitsva kuCP +, chiitiko ichi chinowanzo mukana wekuti uwane maoko ako pane zvichangoburwa mifananidzo, ndosaka Phototrend akaronga kuvhara chiitiko se gore rapfuura.
Vasati vazivisa kubviswa kwayo, varongi veCP + vakaronga kuisa masisitayirimendi emaoko pakupinda nekubuda kwechiratidziro, uye vakakurudzira vashanyi kupfeka mask yekudzivirira, kunyangwe coronavirus iripo " isingazivikanwe sedenda muJapan, "sezvakataurwa neJapan Ministry of Health.
Cancellation meseji paPC + webhusaiti
Hechino chiziviso chakatarwa chatakapiwa:
Sezvo pasina kurapwa kunobudirira kana matanho ehurongwa hwekubata neiyo coronavirus itsva (COVID-19), takasarudza kudzima CP + 2020 nekuti tinopa pamberi pehutano uye kuchengeteka kwevashanyi uye varatidziri. Chiitiko ichi chakatanga kurongwa kuti chiitwe anopfuura mazuva mana paPACIFICO Yokohama kubva Kukadzi 4.
CP + inzvimbo yekutengeserana yevatengi. Chinhu chikuru cherurami urwu ndechekuti vashanyi vanogona kunyengedza makamera epamanje nemidziyo inoenderana kuti vawane pfungwa yemashandisiro avanoita. Chiitiko ichi chinokwevera vashanyi vanosvika zviuru makumi manomwe vasina kuratidzwa, saka hatigone kubvisa zvachose njodzi yekutapukirwa. CIPA inotenda kuti zvakakosha kudzivirira njodzi yakadai zvachose. Kunyangwe izvi zvakashata chaizvo, takasarudza kumisikidza show gore rino. Tinokumbira kushandira pamwe kwanu uye nzwisiso panhau iyi.
Sezvatsanangurwa pamusoro, iyi sarudzo inotevera kubviswa kwezvimwe zviitiko zvepasirese uye fairs seSoftware World Congress muBarcelona, ​​iyo Sochi Investment Forum, iyo Semicon Korea Seoul uye akawanda fairs anofanirwa kuitirwa kuChina
Mubvunzo wekupedzisira watinogona kuzvibvunza isu inotaura nezveTokyo 2020 Mitambo yeOlimpiki iyo inotanga inotevera July. Kana masayendisiti mazhinji achibvumirana pamusoro pechikonzero chedenda iri pakati pekupera kwaFebruary naKurume, zvakaoma kufanotaura kusimudzira kwaro. Yoshiro Mori, mutungamiri weTokyo Olympic Games kuronga komiti, zvisinei, akasimbisa kuti Mitambo yeOlympic yakanga ichifamba zvakanaka uye kuti haana kuronga ku “chevha kana kudzima mitambo. "
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://phototrend.fr/2020/02/annulation-cp-salon-photo-japon/
TELES RELAY 21734 Posts 0 mashoko
Nyanzvi Kuronga Pakusuma Amai Rurimi Muzvikoro
Mutongi Aaron Anopa Kufunga nezvekukuvadzwa uye Astros Scandal
Banana Chocolate Chip Cake Recipe - New York Times